Nagu Saabsan, Xawaha xarigga laga gooyo, Warshadeynta Dharka Dharka ee Polyester - Ningbo MH string Co., Ltd.
Ningbo MH string Co., Ltd. waa hal warshad oo ka mid ah Ningbo MH warshadaha Co., Ltd. Waxay diiradda saareysay tolida tolida iyo wax soo saarida dunta wax soo saarta muddo 12 sano ah. Hadda MH waxay leedahay seddex aag warshadeed oo leh aag warshadeed 120,000m2, 1900 shaqaale ah, oo ku qalabeysan mashiinno heerkoodu sareeyo iyo nidaamka maareynta adag ee wax soo saarka, waxaan siin karnaa macaamiisha tayo sare iyo isku halayn.
Habka soosaarka MH Sewing string warshadaha oo ay ka mid yihiin: dhir udgoon, dheeh, dabayl, xirid iyo tijaabin. Awoodda soosaarida sanadlaha ah waa 30000+ ton. Badeecadeenna oo ay kujirto spun iyo polyester corespun tolon iyo sharooto polyester shareertay, oo lagu heli karo cabirro kaladuwan iyo tilmaamo si loo buuxiyo baahiyaha macaamiisha oo dhan. Dharka tolida MH wuxuu siiyaa soo saarahayaasha caalamiga ah ee dharka, gogosha, rooga, moodada guriga, warshadaha, baakadaha iyo alaabada kale ee tolidda adduunka oo dhan, oo ay si weyn u aqbalaan macaamiisha adduunka oo leh tayo sare oo qiimo sarre leh.
Warshadaha MH embroidery string waxay leedahay qaab dhammaystiran oo wax soo saar ah oo ah lafdhabarta, rinjiyeynta, qaabeynta iyo naqshadeynta, kuwaas oo hubiya wax soo saarka waqtiga oo leh tayo tayo sare leh naqshad wareega iyo maadada polyesterka, Awoodda sanadlaha ee sanadlaha waa 10000 + ton. Xoojinta sarreeya, dhowr wadaag, midab wanaagsan, xakamayn jilicsan iyo midabka midabka leh ayaa ah waxa aan u siino macaamiisha.